LG G4, အရောင်သစ်များ၊ အစွမ်းထက်သောကင်မရာနှင့်စစ်ထုတ်ထားသောပုံများ | Androidsis
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ထင်ရှားကျော်ကြားမှုအသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ Mobil World Congress မှာထုတ်ဖော်ပြသမယ်လို့မျှော်လင့်ရပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူကဘာစီလိုနာကိုလူသိရှင်ကြားတင်ဆက်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပေမယ့်ဒီပစ္စည်းကိုမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ LG သည် G range ၏စတုတ္ထမျိုးဆက်နှင့် ပတ်သက်၍ အံ့အားသင့်စရာအချက်တစ်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးယိုစိမ့်မှုအားအများပြည်သူအားတင်ပြခြင်းအနေဖြင့်ထက်ပိုပြီးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းနှင့်၎င်း၏ software ၏သတင်းကိုမြင်နိုင်ပါသည်ရှိရာစက်၏ပုံရိပ်တွေ 30 ။
LG ကGပြီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ LG G28 ကိုတင်ဆက်ဖို့ပွဲတစ်ခုကျင်းပမယ်လို့ကြေငြာခဲ့တယ်။ သို့သော်ထိုနေ့ရက်မရောက်မချင်းကုမ္ပဏီ၏အနာဂတ် terminal ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မရည်ရွယ်ဘဲယိုစိမ့်မှုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ယိုစိမ့်မှုအသစ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပြသမည့်ဆလိုက်ရှိုးမှရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီသည် G4 ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသူ့ဟာသူပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည်။
ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ terminal နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောဆိုခဲ့ကြသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုတွင်တွေ့ရသောသတင်းများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းမှာအရောင်တွေ၊ ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အဖုံးတွေပါ ၀ င်မှာပါ။ LG G Flex ပုံစံတွင် terminal ကိုမည်သို့ကွေးလိမ့်မည်ကိုကြည့်ပြီး LG G4 ၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ curvature သည်၎င်း၏အဖော်ထက်နည်းသည်။ ဒါဟာအတည်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ် ဘက်ထရီက 3000 mAh ဖြစ်ပြီးဖြုတ်တပ်လို့ရပါတယ်.
p ကိုအတည်ပြုပါ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင် IPS panel နှင့် screen resolution သည် 2560 x 1440 pixels သို့မဟုတ်အတူတူပင် resolution QHD ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာကိရိယာ၏အပြင်းထန်ဆုံးအချက်ကိုတွေ့ရှိပြီး၎င်းသည်နောက်ကင်မရာ 16 Megapixels နှင့် 8 MP ၏ရှေ့ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ပထမမှာ 1.8. XNUMX.fကင်မရာ aperture ရှိသည်။ ထို့အပြင်ဤကင်မရာအသစ်သည်လုပ်ဆောင်မှုများအရပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာနှင့်နီးကပ်သည်။ ၎င်းသည် Snapshots များကို RAW ပုံစံဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်မည်၊ aperture၊ ISO အပြင်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ရှပ်တာအမြန်နှုန်းကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းလာမည့်shipပြီလနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးသားဖြစ်သည်။ goပြီလ ၂၈ ရက်ကိုစျေးကွက်၌မည်သည့်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုသိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ တဖန်သင်တို့က, သင် LG G4 ကိုကြိုက်တယ် ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G4၊ အရောင်သစ်များ၊ အားကောင်းသောကင်မရာနှင့်များစွာသောပေါက်ကြားသောပုံရိပ်များ
အချို့သော Nexus7များတွင် Android 5.0.2 Lollipop တွင်ပြproblemsနာရှိသည်